Maalinta warfaafinta oo laga Xusay Muqdisho – Radio Daljir
Maalinta warfaafinta oo laga Xusay Muqdisho
Janaayo 21, 2018 12:34 g 0
Xuska munaasabadda sannadguurada 44-aad ee maalinta Warfaafinta Soomaaliyeed, oo ay ka qeyb-galeen Ra’iisul wasaare ku xigeenka Dalka, guddoomiyaha cusub ee gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho, wasiir ku xigeenka Warfaafinta, madaxda NUSOJ, ururrada Saxaafadeed iyo suxufiyiin Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Agaasimaha guud ee wasaaradda Warfaafinta C/raxmaan Yuusuf, iyo Xog-hayaga uruurka Suxufiyiinta Qaranka Maxamed Ibraahim Macalimmuu ayaa mid mid uga kala hadlay in laga taliyo sidii warfaafinta dhinaca saxan loogu shaqeyn lahaa iyo marxaladaha ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Warfaafinta C/raxmaan Iidaan Yoonis ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka go’an tahay sidii loo horumarinta lahaa xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Dhinaca kale Heshiis saddex geesood ah oo u dhaxeeyey Wasaaradda Warfaafinta, Jaamacadda Ummadda iyo ururka NUSOJ ayaa lagu kala saxiixdey munsaabadda, kaas oo ku aaddan sare u qaadidda tayarada Suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha magacaaban ee gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisoow) ayaa boggaadiyey heshiiskaan Suxufiyiinta horumarkooda lagu kobcinayo.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa hambalyo Suxufiyiinta iyo bahda Warfaafinta, sheegayna in ay muhiim tahay sidii looga faa’ideysan lahaa awoodda warbaahinta maanta.
Wacaal daray ah: Dagaal ka Qarxi rabba Tukaraq iyo Ciidamadda Somaliland iyo Puntland oo is horfadhiya (dhegayso)